बिजुलीको खम्बा नसार्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ – दैनिक नेपाल न्युज
बिजुलीको खम्बा नसार्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ
भजनी, १३ कात्तिक । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित टीकापुरको जमरा पुलदेखि बसपार्कसम्मको निर्माणाधीन छ लेन सडक विद्युत् खम्बा नसार्दा सडक निर्माणमा समस्या हुन थालेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३३ केभी प्रसारणलाइनका कारण टीकापुरमा निर्माण भइरहेको छ लेन सडकको काम प्रभावित बनेको हो । सडक क्षेत्रभित्र ३३ केभी अन्तर्गतका १४ वटा खम्बा परेका छन् । त्यहाँ सात वटा टावर र सातवटा टिबलर खम्बा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टीकापुरका छोटेलाल यादवले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय सरकारको रु २८ करोडको योजनामा रु १३ करोडको बोलपत्रमार्फत निर्माण भइरहेको टीकापुर नगरपालिका–१ जमरा पुलदेखि बसपार्कसम्मको दुई दशमलव तीन किलोमिटरमा छ लेन सडक निर्माण भइरहेको छ । यसको निर्माण रमण केएस जेभीले शुरु गरेको छ । अहिले सडकमा माटो भर्ने र सम्याउने काम भइरहेको छ । सडक निर्माणमा कार्यरत इञ्जिनीयर गगन शाहीले काममा निकै समस्या भइरहेको बताउँदै बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि विद्युत् कार्यालयले प्रसारणलाइन हटाउने बारेमा वास्ता नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
“हामीले पटक-पटक पत्र बुझायौँ, कैयौँ पटक भेट्यौँ, तैपनि कार्यालयले वास्ता गरेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “काम गर्न निकै समस्या भइरहेको छ । विद्युत् खम्बा नसारेकै कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न कठिन हुनसक्छ ।” उहाँले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत समस्याका बारेमा जानकारी दिएको भन्दै दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने काममा विद्युत्को खम्बा नसारेकै कारण ढिलाइ हुनसक्ने बताउनुभयो ।
“विद्युत् प्राधिकरणले हिउँद महीनामा विद्युत्को खम्बा सार्ने कुरा गर्दैछ”, शाहीले भन्नुभयो, “जति ढिलो विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खम्बा सार्छ, त्यति नै ढिलो काम सम्पन्न हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा सडक निर्माणको बाधक विद्युत् खम्बा नै भएको छ ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टीकापुर वितरण केन्द्रका प्रमुख हिमांशु यावद भने यस बारेमा लिखितरूपमा कुनै जानकारी नआएको बताउनुभयो । उहाँले केही व्यक्तिले फोनमै सोधेको र आफूले फोनबाटै जवाफ दिएको बताउनुभयो । “केही व्यक्तिले फोनमा सोधेका थिए । मैले पनि फोनमै जवाफ दिएको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कसरी सार्ने ? कहाँ सार्ने ? भन्ने बारेमा आधिकारिक रूपमा कोही आएको छैन । योजनासहित सरोकारवाला आए म विकल्प खोज्न तयार छु ।”
तत्कालीन अवस्थामा टीकापुर नगरपालिका–१, ब्लक नं–११ स्थित कार्यालयसँगै रहेको सव–स्टेशनसम्म पु¥याउन ३३ केभी लाइनबीच बजारबाटै ल्याइएको थियो । तर, केही वर्षअघि सव–स्टेशन मुनुवा रोडस्थित खाध्य गोदाम नजिकै सारिएको छ । बजार क्षेत्रको ३३ केभीए विद्युत् लाइनसँंगै अन्य स–साना विद्युत्लाइनसमेत हटाउनुपर्ने देखिएको छ । निर्माण कम्पनीले विद्युत् खम्बाका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको भन्दै निर्माणको काममा समेत सुस्तता देखाएको छ ।
विद्युत् खम्बाको समस्या देखाएर काम लम्ब्याउने ठूलो आधार निर्माण कम्पनीले पाएको स्थानीय व्यापारी विकास चौधरीले बताउनुभयो । “राज्यकै कमजोर नीतिका कारण नै विकास निर्माणको काम लम्बिरहेको छ”, चौधरीले भन्नुभयो, “जमरा पुलदेखि बसपार्कसम्मको सडकको समस्या होइन यो सबै ठाउँको समस्या हो । काम शुरु हुनुभन्दा पहिला नै विद्युत् खम्बा हटाइएको हुनुपर्ने हो ।” (रासस)